လီဗာပူး ဂန္တ၀င် ကစားသမားကြီး အီရန်ရှပ်ရဲ့ ကလပ် ဂိုးသွင်းစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့ အတွက?? - Yangon Media Group
လီဗာပူး တိုက်စစ်မှုး မိုဟာမက်ဆာလက်ဟာ တစ်ရာသီအတွင်း ကလပ်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားအဖြစ် စံချိန်တင်ထားခဲ့တဲ့ အီရန်ရပ်ရဲ့ သွင်းဂိုး စံချိန်ကို အမှီလိုက်ကာ လီဗာပူးအသင်းရဲ့ သမိုင်းမှတ်တမ်းထဲကို ၀င်ရောက်သွားဖို့အတွက် ပစ်မှတ်ထားနေပါတယ်။ အီဂျစ်လက်ရွေးစင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘုန်းမောက်အသင်းနဲ့ပွဲမှာ လီဗာပူးအသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ သွင်းဂိုး ၄၀ မြောက်ကို သွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၃-၈၄ ဘောလုံးရာသီက ကလပ်အသင်းမှာ ဂိုးသွင်းစံချိန်တင်ထားခဲ့တဲ့ အီရန်ရပ်ရဲ့ သွင်းဂိုး မှတ်တမ်းကို အမှီလိုက်ဖို့ ၇ ဂိုးသားလိုပါတော့တယ်။
လီဗာပူးအသင်းဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် လေးပွဲ ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် နှစ်ကျော့နဲ့ အနည်းဆုံး ခြောက်ပွဲကစားသွားရဖို့ ရှိနေပြီး အန်ဖီးကစားသမားဘ၀ ပထမဦးဆုံး ရာသီမှာပဲ စံချိန်တွေ တင်ထားခဲ့တဲ့ ဆာလက်အတွက် ရပ်ရဲ့ စံချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ ပွဲအရေအတွက် ရှိနေပါတယ်။ ဆာလက်က “လီဗာပူးလို ကလပ်အသင်း၇ဲ့ နံပါတ်တစ် ဖြစ်ဖို့အတွက် စံချိန်ချိုးဖျက်ဖို့ အခွင့်အရေး ကြီးကြီးမားမား ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာ ကြီးကြယ်တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုပါ။ အီရန်ရပ်ရဲ့ စံချိန်ကို ကျွန်တော် ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အလွန်ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းမှာပါ။ ကျွန်တော်အခု ဂိုး၄၀ ရနေတဲ့အတွက် အရမ်းပျော်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဂိုးတွေ ဆက်လက်သွင်းယူချင်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော် သွင်းဂိုး မှတ်တမ်းမှာ လီဗာပူးရဲ့ နံပါတ်တစ် ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
လီဗာပူးအသင်းလို ဂန္တ၀င်ကလပ်တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ရဲ့နံမည်ကို မြင်တွေ့ရတဲ့အခါ အမြဲတမ်းကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားချက်ကို ရနေမှာပါ။ မတူညီတဲ့ ခံစားချက်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် ဒီအတွက် အရမ်းပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြဲတမ်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီထက်ပိုမို တိုးတက်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အခု ဂိုး ၄၀ ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ‘ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ? မင်းနံပါတ်တစ် ဖြစ်နိုင်တာပဲ’ ဒီစံချိန်ကို ချိုးဖျက်ဖို့အတွက် ကျွန်တော် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကစားသမား ၁၁ ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ ကျွန်တော်ဟာ အသင်းအတွက် ကစားပေးနေတာပါ။ တစ်ဦးချင်း ဆုတွေနဲ့ပဲ မရပါဘူး။ အသင်းအတွက် ဖလားတွေ ရယူပေးချင်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခြားတစ်ယောက်ကို ဂိုးဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင် လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ အသင်းအတွက်ပါ။’ လို့ပြောသွားပါတယ်။
ဘုန်းမောက်နဲ့ပွဲပြီးနောက် ဆာလက်ရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်းတွေကတော့.. ဆာလက်ဟာ တစ်ရာသီအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဂိုး ၃၀ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ရှစ်ယောက်မြောက်ကစားသမား ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ဒီမှတ်တမ်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အခြားကစားသမားတွေကတော့ အန်ဒီကိုး အလန်ရှီးယားရား သီယာရီအွန်နရီ ကယ်ဗင်ဖီလစ် ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ရော်ဘင်ဗန်ပါစီ လူးဝစ်ဆွာရက် တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆာလက်ဟာ ရော်ဂျာဟန့် (၁၉၆၁-၆၂) အီရန်ရပ်ရှ် (၁၉၈၃-၈၄) (၁၉၈၆-၈၇) တို့နောက်ပိုင်း ကလပ်အတွက် တစ်ရာသီအတွင်း ဂိုး ၄၀ သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ တတိယမြောက် လီဗာပူးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘုန်းမောက်နဲ့ ပွဲမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆာလက်ဟာ အန်ဖီးမှာ ကစားခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ၇ ပွဲစလုံး ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ သူဖြစ်နေပါတယ်။ မိုဟာမက်ဆာလက် ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇-၀၈ ဘောလုံးရာသီက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် တိုက်စစ်မှုးဟောင်း စီရော်နယ်ဒို (၄၂ဂိုး) နောက်ပိုင်း တစ်ရာသီအတွင်း ပြိုင်ပွဲစုံ 40+ ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုးဟောင်း ဒီဒီယာဒရော့ဘာ ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၀၉-၁၀ က ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၂၉ဂိုးသွင်းယူခဲ့ကာ တစ်ရာသီအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူနိုင်တဲ့ အာဖရိကကစားသမား အဖြစ် စံချိန်တင်ထားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဂိုး ၃၀ ပြည့်သွားခဲ့တဲ့ ဆာလက်ဟာ အဆိုပါစံချိန်ကို ချိူးဖျက်ခဲ့ပါတယ်။